8 Xaaladood Haddii Aad Indhahaaga Ku Aragto Dhaqso U Booqo Dhakhtar | Berberanews.com
Home Qubanaha 8 Xaaladood Haddii Aad Indhahaaga Ku Aragto Dhaqso U Booqo Dhakhtar
8 Xaaladood Haddii Aad Indhahaaga Ku Aragto Dhaqso U Booqo Dhakhtar
Hargeysa-(Berberanews)- Waa qaybtii labaad ee qormadii aynu ku eegaynay dhowr calaamadood oo ay xeeldheereyaashu xuseen in haddii qofku indhihiisa ku arko ay qasab tahay in uu dhakhtar la xidhiidho, maadaama oo ay digniin u noqon karaa dhibaato caafimaad oo qofka haysa.
Bararka Indhaha: Marar badan waxaa dhacda in aynu qawadno awoodda arag ee indhaheenna oo innaga oo taas ka jawaabayno aynu gacanta ku marmarno, ama dhowrjeer inta aynu isku xidhno haddanak ala furno. Laakiin intaas wax ka badan uma dhaafno oo marka ay xaaladda araggu caadigii iska noqoto ayaa aynu bartaas kaga tagnaa. Haddaba waxa ay dhakhaatiirtu xaqiijinayaan in xaaladaha noocan ahi ay indhaha ku yimadadaan marka uu xanuun ka jiro qanjidhada dhuunta ee Tayroodhka loo yaqaanno, gaar ahaan marka shaqada uu qabanayo iyo dheecaannada uu sii deynayaa ay ka badan yihiin intii dabiiciga ahayd ee uu jidhku u baahnaa.
Indhaha oo huruud noqda: Marar badan in midabka indhuhu casaan noqdaa waxa ay ku timaaddaa xaalado aan dhibaato badan sii lahayn, waxaa ka mid ah hurdo la’aanta iyo isha oo xanuun ku jiro, ama indhaha oo dareema shay aanay jeclaysan sida qiiqa ama wax kale oo gaadha. Laakiin in midabkoodu uu huruud noqdaa aad ayaa ay uga duwan tahay xaaladdaas hore ee marar badan haddii aanay muddo dheer sii jirin aan dhibaato keenin.
Indhaha oo huruud noqdaa macnaha keliya ee ay leeyihiin waa in ay dhibaato caafimaad darro ka jirto beerka, sidaa awgeed in indhahaagu huruud noqdaan waxa ay qasab kaaga dhigaysaa in aad degdeg ula xidhiidho dhakhtar beerka ku takhasusay.
Aragga oo hadh-hadh joogto ahi galo: Sida aynu horeba u soo xusnay marar badan ayaa uu aragga hadh galaa, marmar ka mid ahna waa xaalad iska sahlan oo qofka dhaqso uga tagta, laakiin aragga oo si joogto ah hadh kaaga teedaa waa in ay markaba ku xasuusiso in shabakadda aragga oo xanuun iyo dhaawac gaadhaa ay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn eek a dhasha xanuunka macaanka. Haddii aad macaan leedahay oo aad xaaladdan isku aragto macnaheedu waa in aanad raacin talooyinkii caafimaad ee dhakhtarkaagu kaa siiyey hab nololeedka xaaladdaada caafimaad waajibinayso; sida cuntada iyo dawada qaadashadeedaba.
Haddii aanad hore macaan isugu ogeyn oo xaaladdan aad joogto ula kulantana dhaqso ugu tag dhakhtar takhasus ah oo kaa baadha xanuunka macaanka, kaddib haddii aad iska weydo u tag dhakhtarka indhaha.
Digniin indho-beel: Isbeddel kasta oo aad ka dareento araggaaga waxa aad markaba u aqoonsataa in uu yahay digniin kama dambays ah oo kuu sheegaysa in khatar dhinaca aragga ahi kugu soo fool leedahay. Daciifnimo, dahaadh iyo hadh kaa gala aragga, aragga oo aan aad waadax kuugu noqon iyo xaalad kasta oo aragga la xidhiidhaa waxa ay horudhac u noqon kartaa indho beel kugu soo fool leh, sidaa awgeed ha u kaadin in aad marka aad aragtaba kala tashado dhakhtar indhaha ku xeeldheer.
Previous articleUNHCR oo haweenay Sucuudiyad ah ka saartay madaarka Hongkong
Next articleFanaanka Cawaale Aadan oo hal milyan oo faranka Djibouti ah guddoonsiiyay dadka baahiyaha gaarka ah qaba
Xogta Nashqadda cusub ee Drone-ta Turkiga
Walaalihii Maalqabeenada Noqday